Coronavirus Kuputika Kunotyora Supply Chains! | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulCoronavirus Kuputika Kunotyora Supply Chains!
26 / 03 / 2020 34 Istanbul, Railway, GENERAL, HIGHWAY, Tire Wheel Systems, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, TURKEY
coronavirus kubuda-kupwanya kunopa macheni
Ne coronavirus kubuda, isu takanyatsoona kuti sei handwhip (inoda kuwedzeredza) mhedzisiro inoitika mumaketani ekugovera. Zvimwe zvigadzirwa zvave kusingaonekwe, masherufu emusika haana chinhu uye mitengo yavo yakapetwa kaviri. Production Mafekitori akamira nekuda kwechikamu chekupa matambudziko. Nyika dzakawedzera matanho ekudzivirira varimi. Kune rimwe divi, kwave nekuputika mune e-commerce. Kubata-kunze masevhisi akawedzera zvinoshamisa.
Kureba kwenzvimbo kwave kukosha. Hwepfupi hutano hwekupa hutano hwaifanirwa kutanga kusimbiswa TIR inofamba yakamiswa kumiganhu uye TIR miswe yakagadzirwa. Vatyairi vemotokari vakatanga kuisa nguva-yemazuva gumi nemana yekugadzikwa. Mukufambisa RO-RO, vatyairi vaisakwanisa kutakurwa nendege uye kugara kwavo muEuropean Union kwakapfupiswa. Iko kushomeka kwemutyairi aripo kare kwakapetwa. Nekuda kwekuomarara kwezvinhu zvekufambisa mumigwagwa, zvinhu zvinotama kuenda kuchikepe nekufambisa. Paive nekuwedzera kwakakura kwekubatira. Nekuda kwekuti machinjisi ekunze aisakwanisa kuburitswa nenguva mumhenderekedzo yegungwa, apo kudiwa kwemidziyo isina chinhu kwakawedzera mumahara ekutengesa kunze, mitengo yakawedzera nemamiriro emafuta ekuchenesa akawedzera. Mairairo epasirese akanyoreswa kutakurwa kwemhepo. Nekudaro, semhedzisiro yekudzora ndege dzekufamba, ndege yekuremerwa yakadzikira zvakanyanya uye zvekuchengeta zvakatanga kupihwa mavhiki anotevera. Nguva dzeExpedition dzakawedzera nekuda kweiyo wagon disinawon mashandiro pamutsetse wechitima. Nekuda kweizvozvo, izvo cheni dzekutakura dzakatsemurwa? Hongu. Mhedzisiro yechipfuva mumaketani ekugovera inogona chete kudzivirirwa nekuenzanisa macheni ekugovera. Kukurumidza uye kurudyi ruzivo kuyerera iri ndiyo nyaya yekutanga. Sokutaura kunoita World Health Organisation: "test, test, test". Supply maketeni mapato anofanirwa kuronga kumberi kune ino mhanyisa kuyerera kweruzivo uye kushanda pamwe chete kune zvakajairika kwebhizinesi. Imwe-yepakati-mhinduro haina kukwana.
Maitiro atiri maari akatiratidza zvakare zvakare kukosha kwekupa zvinhu. Isu takaona nei mabasa ekuronga akakosha pakupa mabasa akasimba zvese maererano nekuchengetedza hutanho hwekupa muhutano uye kusangana nehutano hwehutano, hutsanana, nezvimwe zvinodiwa nevanhu. Zvakare uye nguva yekubva, izvo zvinodikanwa zvevaya vasingakwanise kubuda zvinofanirwa kuzadzikiswa.
Mari yemubhadharo wekutengesa ndiyo huwandu hwekutenga, kugadzira uye mitengo yezvinhu. Mhedziso yedu kubva kuzviitiko zvechangobva kuitika inoratidza kuti isu tinofanirwa kusimudzira mamwe macomputer ekupana rubatsiro uye kusiyanisa pakati penjodzi neyekupedzisira njodzi. Isu tinofanirwa kutsvaga nzira dzekutengesa dzekunze dzisiri dzekunze panguva dzedenda. Panguva ino, mari yekuvaka dzimba inowedzera kutengeserana kwekunze nechitima inova yakakosha. Zviripachena kuti shanduko yemutyairi kumuganho, shanduko yemidziyo (yakazara-yakazara, yakazara-isina chinhu), shanduko yetrailer uye nzira dzinokurumidza kuuraya huturu dzinoda kuvandudzwa. Buffer nzvimbo dzinofanirwa kugadzirwa izvi. Dzimwe nzira uye magedhi emuganhu anofanirwa kuverengerwa uye mhinduro dzekuraira dzinofanira kukurumidza dzinofanirwa kuverengerwa. Nyika dzakasiyana siyana dzine mutero wakasiyana munzira dzakasiyana siyana. Nzira dzakakodzera dzinogona kugadzirwa kuburikidza nezvibvumirano zvenguva pfupi nenyika idzi.
Iyo 14-mazuva ekugadziriswa nguva yakaiswa pamuganho yekupinda kune vatyairi vemotokari inofanira kubviswa nekukurumidza sezvinobvira uye nekupinda / kubuda kwevose vatyairi veTurkey nevekunze vatyairi vemotokari vanofanirwa kubvumidzwa pamwe nemakiti ekuedza pamiganhu. Kuwedzera kunofanirwa kuitwa maererano nenguva yekugara kwemutyairi wemotokari munyika dzeEU. Vatyairi vemavhiza mafomu anofanirwa kuongororwa seanokosha uye vhiza nyowani inofanirwa kuwedzerwa nekuwedzera nguva yacho. Nekubatana kwenzvimbo dzakakodzera, inofanirwa kushambadza mameseji ayo anoshandiswa panguva yekushanda nekuzorora, izvo zvisingakanganise kuchengetedza zvisingaiti, uye nguva yekuwedzera inofanira kuitwa zvichienderana nezvinodiwa. Kuitira kurerutsa maitiro ebhizinesi emidziyo yekuendesa kunze yegungwa, kushandiswa kweVerified Gross Weight (VGM) inorema kunofanirwa kukanganiswa, uye masangano echikepe anofanirwa kukumbira tsamba yekuzvipira kubva kumakambani anotumira. Iyo mutyairi / mutoro system inofanirwa kutariswa zvakare uye huwandu hwe tachograph hwekutyaira nemakambani hunofanirwa kuve nyore uye huchikurumidza. Kuronga kunofanirwa kuitirwa kupihwa kwevatyairi vatsva kuti vashande mukufambisa kwenyika dzakawanda (kudzidziswa, kuongorora, kuferefetwa), uye internet kuwanikwa kwevamwe SRC neADR kudzidziswa uye bvunzo dzinofanirwa kuongororwa.
Shift basa revashandi vehurumende rinowedzera bhizinesi maitiro. Panzvimbo pezvo, maitiro acho anofanirwa kukwidziridzwa nekuona nekushandiswa kwakakwana kwemapepa ekugadzirisa asina mapepa uye matanho anofanirwa kutorwa kudzivirira kupererwa kwebasa padanho rega rega. Muchirongwa chakaziviswa, hapana rutsigiro rwakakosha rwevashandi vezvinhu, iro rinokanganiswa zvikuru nekubuda, kunze kwekunge mitero yeVAT ichinonoka kwemwedzi mitanhatu. Rutsigiro urwu rwakatopihwa kumatunhu gumi nematanhatu. Munguva ino, SCT mumafuta, inova chinhu chakakosha mutengo yezvinhu, inofanira kubviswa uye sevhisi inofanira kupihwa mumamiriro ezvinhu akanaka.
Seimwe nhanho yepakati, nhanho dzekufambisa kwedu kukuru dzinobatanidza nyika yedu uye nzvimbo dzekudyara / misha inovakwa mumakororamu aya inofanira kutsanangurwa kuitira kuchengetedza kuyerera kwezvinhu uye kuderedza njodzi.
Kune makambani mazhinji munyika medu mukati meganho remaketani epasi rese rekupa. Nyika dziri kuMadokero havadi kugadzira zvigadzirwa munyika yavo. Turkey ari kukura pamwe aina vaifarira budiriro womuenzaniso. Nekudaro, isu tinofanirawo kufunga nezve chokwadi chekuti isu tinotsamira pazvinhu zvakagadzirwa. Nekudaro, isu tinofanirwa kutsanangura matambudziko atiri kusangana nawo mukati mekuwana izvi zvigadzirwa zvinyatso nyatsotarisa pane mhinduro dzekuno. Zvimwe zvinhu zvinogadzirwa hadzina kubudiswa muna Turkey. Naizvozvo, tinofanirwa kuve mumaketani epasi rese ekupa nguva dzese.
Chinhu chakakosha kuverengera njodzi dzese uye kutora matanho anodiwa. Isu tinofanirwa kuita hurongwa hwekuchengetedza njodzi zvakadzama uye tichienderera mberi tichiita zvinoenderana necheni yekuchengetera zvinhu uye kuita zvinhu uye kusimbisa hurongwa hwekugadzirisa dambudziko munguva pfupi. Saka isu tinofanirwa kutsvaga nzira dzekushandura kubva kuhupfumi kubva kune imwe-yepakati yekupeedzera muenzaniso kuenda kune yemhando-yepakati yekugovera modhi. Tinofanira kugadzira zvigadzirwa zvine hungwaru munyika yedu.
Nekudaro, kukosha kwemaitiro akasarudzika uye agility mumaketeni ekutakura zvakabudazve. Izvo zvinonzwisiswa kuti sarudzo dzinofanirwa kutemerwa kumberi mune zvese logistics process uye kugadzirwa, uye zvinokudziridzwa zvinofanirwa kutariswa nesimba uye yakakodzera kwazvo inofanira kushandiswa zvinoenderana nemamiriro ezvinhu.
muzvinafundo Dr. Mehmet TANYAŞ
Mutungamiri weLogistics Association (LODER)
Kutya Coronavirus Yakawedzera Bursa Traic!
Dhizaini uye kuvaka pakati peIstanbul-Ankara yakakwira mhanyisa njanji njanji Geyve-Sapanca…
Evraz kuendesa Sitima kuRussia Railways kwemakore mashanu
Ansteel anopa motokari inorema yeHarbin-Dalian motokari huru
Ansteel anopa motokari inorema yeHarbin-Dalian yepamusoro-soro
Tibnor anopa midziyo yeLKAB yematare engoro
Siemens inopa makateji eMetro Lines kuDhaha, Qatar.
Nhasi munhoroondo: 26 March 1918 paHejaz Railway